अस्ट्रेलियामा रोजगारी गुमाएका नेपाली विद्यार्थी भन्छन्- मुटुमाथि ढुंगा राखी बाँच्नुपर्‍या छ - लण्डन काठमाडौँ
अस्ट्रेलियामा रोजगारी गुमाएका नेपाली विद्यार्थी भन्छन्- मुटुमाथि ढुंगा राखी बाँच्नुपर्‍या छ
छत्र शंकर, अस्ट्रेलिया चैत २०, २०७६ | बिहीबार
अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदा नेपालमा बस्ने बुवाआमालाई पीडा हुन्छ। चर्को ब्याजमा घरजग्गा बैंकमा राखि छोराछोरी अस्ट्रेलिया पठाएका बुवाआमा नेपालबाट भन्न थालेका छन्–ग्राहो भयो भने नेपाल नै फर्कनु।
तथापि, जागिर गुमाएका छोराछोरी अस्ट्रेलियाबाट आफ्नो वास्तविकता सुनाउन चाहँदैनन्। उनीहरु भन्छन्– जागिर त गुम्योगुम्यो, बाआमालाई थप चिन्ता किन दिनु, मुटुमाथि ढुंगा राखी बाँच्नै पर्‍यो नि!
उच्चशिक्षाका लागि अहिले अस्ट्रेलियामा ६० हजार हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी छन्। विश्वभरका करिब ७ लाख ५० हजार विद्यार्थी अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्दछन्। छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दे बसेका बाआमा अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसको संक्रमण सुन्दा अहिले भोक न तिर्खामा छन्।
सिड्नीमा अध्ययनरत सोनाक्षीको अहिले अन्तिम सेमेस्टर हो। गत फेब्रुअरीमा उनले साथीभाइसँग सरसापट र अलिकति आफूसँग भएको बचतले ११ हजार डलर अन्तिम सेमेस्टरको शुल्क तिरिन्। उनी एउटा कम्पनीमा काम गर्दै पढ्दै थिइन्।
सिड्नीको एक्लो बसाइ उनका लागि पहिले त सहज नै थियो। तर, कोरोना महामारीको विपत्तिले अस्ट्रेलिया आक्रान्त बन्न थाल्यो, त्यसपछि सिड्नीमा बस्नका लागि उनका खुट्टा काँप्न थाले। कोभिडकै कारण उनले काम गर्ने ठाउँमा ताल्चा लाग्यो। केही जम्मा गरेको पैसा पनि कलेज शुल्क माग सक्यो।
उनी भन्छिन्–जागिर छैन, १० हजार डलर त ऋण तिर्नै बाँकी छ के गर्ने? अब मसँग भएको पैसाले एक महिना मात्र थेग्छ। सोनाक्षी जस्तै जागिर गुमाएर भौतारिरहेका विद्यार्थी अस्टे«लियामा धेरै भेटिन्छन्। अर्को विद्यार्थी अनिस न्यौपानेले एयरपोर्टमा ब्यागेज ह्यान्ड्लिङमा काम पाएको एक हप्ता मात्र भएको थियो। जागिर पाँउदा उनी निकै हौसिएका थिए। एयरपोर्टको जागिर घन्टाको २६ डलर। तर, उनको त्यो खुसी एक हप्ता पनि टिकेन।
कोभिडका कारण कम्पनीले कर्मचारी घटायो । उनी त्यहाँ क्याजुल काम गर्दै थिए। तर, विमान कम्पनीले उडान बन्द गरेपछि उनको जागिर पनि खोसिएको छ। तैपनि उनी हारेका छैैनन्। अहिले उनी सरसफाइको काम त गर्छन्, तर, उनको जागिर कहिले जाने हो, टुंगो छैन। सोनाक्षी र अनिस ६० हजार विद्यार्थीका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्।
उनीहरुजस्तै सयांै विद्यार्थी अस्टे«लियामा बेरोजगार भएका छन्। त्यसो त यहाँका केही ठूला सुपरमार्केटले जागिरको अफर पनि नगरेका होइनन्। मागभन्दा बढी निवेदन परेपछि जागिरको सम्भावना पनि त्यति देखिँदैन। होटल, क्याफे तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने नेपाली विद्यार्थी त सबै बेरोजगार नै भएका छन्।
जागिरमा टिकेकाहरु पनि कहिले जागिर जाने दिनगन्ति गरेर बसेका छन्। त्यहाँ मानिसको चहलपल छैन। कुनाकाप्चामा खुलेका क्याफेमा व्यापार नै हँुदैन। सरकारले विद्यार्थीलाई २० घन्टाभन्दा बढी काम गर्ने बाटो खुला गरे पनि बजारमा रोजगारदाता बढेका छैनन्। सिड्नी विश्वविद्यालयकी विद्यार्थी रिस्ता विश्वकर्मा भन्छिन्–अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई काम गर्ने समय बढाउँदा केही राहत मिले पनि हामीलाई काममा केही भइहाल्यो भने इन्स्योरेन्स व्यवस्था नै छैन।
कोभिडका कारण कलेज बन्द भएपछि घरवाटै अनलाइन अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको माग छ–कम्तीमा कोभिड अवधिभर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई सामाजिक सुरक्षा तथा २० प्रतिशत कलेज शुल्क फिर्ताको व्यवस्था हुनुपर्छ।
अहिले संकटका बेला नेपाली विद्यार्थीलाई दालचामल, बाँड्नु भन्दा पनि उनीहरुले सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारसँग लबिङ गर्नुु आवश्यक देखिन्छ।
पल शाहको मुद्दाको आज उच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख विपक्षी नेता ओली (लाइभ)
दोस्रो स्थानका लागि केशव स्थापित र सिर्जना सिंहको प्रतिस्पर्धा
हेटौडामा मुल्यवृद्धिविरुद्ध अनेरास्ववियुको प्रदर्शन, ४ नेता पक्राउ
काठमाडौंमा कांग्रेसले जित्यो १८ औं वडा, १६ नम्बरबाट मुकुन्द निर्वाचित
दिल्लीमा कन्सर्ट गर्दै जस्टिन बिबर
प्रदेश १ का १४ जिल्लामा क-कसले पाउँदैछ जिल्ला समन्वय समितिकाे नेतृत्व ?
लयमा फर्कियाे राहदानी विभाग, आइतबार पनि कार्यालय खुल्ने
अमेरिका: टेक्ससमा २१ जनालाई गोली हानी मार्नुअघि बन्दुकधारीले सामाजिक सञ्जालमा त्यसबारे 'लेखेका थिए'
अस्ट्रेलिया निर्वाचनः एक दशकपछि लेबर पार्टी सत्तामा, त्यहाँ रहेका नेपालीलाई के फरक पार्छ?